Iingxaki ezi-5 eziPhezulu zeNkonzo yaBathengi (kunye nendlela yokuzilungisa) | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Septemba 22, 2017 Douglas Karr
Kusekho iinkampani ezininzi ezikholelwa ukuba inkonzo yabathengi kunye nentengiso yimisebenzi eyahlukeneyo ngaphakathi kombutho. Ngelishwa, la masebe mabini ahlala engavisisani kwintlangano. Inkonzo yabathengi ngoku inento kawonkewonke enokuthi ichaphazele-kwaye ide itshabalalise-igama lenkampani, iphazamise inkqubela phambili eyenziwa ngabathengisi.
Ngaphandle kwenguqu yedijithali ethatha indawo kwicandelo lenkonzo yabathengi, ukubonelela ngamava abathengi kakhulu kuhlala kubalulekile kumashishini kumashishini ohlukeneyo. Nantsi ke eyona mingeni iphambili kwinkonzo yabathengi kwanamhlanje kwaye ungayisombulula njani ukubonelela ngamava amangalisayo abathengi.
Iinkampani ezifana Dell, umthengi, yenze kakuhle kakhulu, inika wonke umsebenzi uqeqesho ngendlela yokubandakanya imithombo yeendaba zentlalo kwimisebenzi yabo kunye nokubonelela ngezixhobo ezithe ngqo kubathengi abanokubhekisa kubo izicelo zikarhulumente. Le ndlela iqinisekisa ukuba abathengi baphathwa ngokufanelekileyo nokuba bathetha nabani nokuba yeyiphi incoko eyenzekayo.
Uqeqesho olukhazimlayo luphuhlise le infographic, the Imingeni emi-5 ephezulu yeNkonzo yaBaxumi ka-2010 kunye noKwenzayo malunga nayo.
Ukubhalwa kweNdwendwe yoMthengi -Amashishini amaninzi ayasilela ukwenza ukusebenzisana kwabaxhasi, okukhokelela kumanqanaba aphezulu e-churn, amanqanaba okwaneliseka kwabathengi, kunye nokuncipha kokunyaniseka.
Ukuba nembono epheleleyo yoMthengi -Ukuba abasebenzi bakho banokufikelela kwangoko kulwazi olubalulekileyo malunga nethemba kunye nentengiso, banethuba elingcono lokuvala isivumelwano okanye ubuncinci ukunceda umntu kunye nokushiya umbono ongalibalekiyo.
Ukuqinisekisa ngokuSebenza ngokukuko -Iindlela ezichanekileyo nezisebenzayo zokunxibelelana komthengi ngamnye zibalulekile Oku kufuna inkqubo nganye nganye kunye nenkqubo ilungelelaniswe kwaye ilungelelaniswe ngexesha langempela.
Imilinganiselo yokuKhangela abaThengi abahlukeneyo -Abathengi ngoku banokhetho lokunxibelelana neemveliso ngeendlela ezahlukeneyo ezinje nge-imeyile, isicatshulwa, umnxeba, ingxoxo kunye nemidiya yoluntu. Qiniseka ukuba uyabanikela.
Ukubandakanya uMthengi ophoxekileyo -Ukulindelwa kwabaThengi kuphezulu kunakuqala kwaye kubalulekile ukuba abameli beenkonzo zakho babenakho, isantya, kunye nokuzimela ukuqinisekisa ukuba umthengi odanileyo ujikwa abe lolonwabileyo.
Ngelixa le mingeni mihlanu izwakala ilula, kunokuthatha iminyaka ukudibanisa ukubamba kwabathengi ngexesha lokwenyani ngokusebenzisa iinkqubo zokulawulwa kobudlelwane babathengi kunye nokubonelela ngentengiso, ukuthengisa kunye namaqela enkonzo yabathengi ngolwazi abaludingayo.
tags: inkonzo yabathengi enomsindoInkonzo embi kubathengiCRMInkonzo eyenzelweimingeni yenkonzo yabathengiumbono wabathengiuqeqesho olukhazimlayoiingongoma zokuchukumisaumbono womthengi
Intengiso yePodcast: Kutheni iinkampani zityala imali kwiPodcasting